Kii QadhaabKa Iyo QadhiidhKa Laga Gooyay Ayaa Qaaq Iyo Qayladii Ka Dhamaatay ! | Somaliland.Org
Kii QadhaabKa Iyo QadhiidhKa Laga Gooyay Ayaa Qaaq Iyo Qayladii Ka Dhamaatay !
January 3, 2013	Jamhuuriyada Somaliland waxay la soo noqotay xornimadeedii bishii May 1991, waxaa manta laga jooga 22 sanadood oo sedex bilood la’. Xukuumadda hada talada haysaa ee uu madaxda ka yahay Md Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo oo imika dhamaysatay muddo laba sanadood iyo badh ah ayaa isku dhaanta 19 kii sanadood ee ka horeeyay. Dawlad ka horaysay oo daaqad jabtay ku samaysay dakhliga dalka soo gala lama hayo. Xukuumaddii UDUB ee ka horaysay haba soo hadal qaadin , xaalkeedu wuxuu ahaa qaataye qaado. Waa markhaati ma doonto in maanta aqlabiyadda shacabka aamusan (silent majority ) ay mabsuud ka yihiin xukuumadda talada haysa. Dalka waxay kulla wareegtay khasnaddii qaranka oo madhan, dalka oo dayn boqol milyan oo Dollar ah lagu leeyahay , shaqalihii iyo ciidamadii qaranka iyo Booliska oo aan mushahar la siin lix bilood oo gow ah !
Xukuumadani waxay bixisay dayntii, waliba shaqaalihiina shan bilood gudahood ayay u labanlaabtay mushaharkii, oo kii $150 qaadan jiray oo kale looga dhigay $300. Waxay samaysay mashaariic aan xad lahayn, waxay keentay Idaacad dalka wada gaadha oo xukuumaddii 8 sanadood jirtay keeni kari wayday, waxay badashay lacagtii giinbaarta ahayd ee gobolka Togdheer oo dawladihii ka horeeyay qaban kariwaayeen iyo boqolaal kale oo aanan soo koobi karayn . Xukuumaddan maanta jirta hadaba shacabka reer Somalilandow yaa wax ku waayay, yaa qaaq iyo qaylo ka dhamaatay oo maanta marna caytamaya marna umadda ku jaha wareerinaya xaalad abuur , Kuwaa umaddii waalay waa kee dee ? Waa kii ku noola xaaraantii UDUB ee ku soo caano maalay qaataye qaado, waa kuwa maanta marba kaadh qabiil dadka ku jaha wareerinay ee marka ay waayeen wax muuqda oo ay sheegaan qabyaalad miciin moodaya. Tusaale haddaan soo qaato nin kamid ah kuwaas quutkooduba ahaa qadhiidh ku noolka oo rubuc qaada oo maalinle ahaa oo lagu siin jiray qaadka aflagaadooyinka iyo been abuurka ay kasameeyaan madaxdii xisbiga KULMIYE ayaa maalmihii u dambeeyay UDUB sii laalaaday ku yidhi nin kale waar KULMIYE aanu soo galee afka naga waynaaday wax ma deeqsiinaysaan dee ? Waxaa ninkii ugu jawaabay KULMIYE afkii xalaal wax ku cuna ayuu wax deeqsiiyaa af xaaraan ku soo baaba’ay KULMIYE meel kuma laha.
Hadal wuxuu ku eg yahay caqliga fayowina garanayaa faraqa u dhexeeya labada xukuumadood oo midna dalka sideed sanadood guranaysay miisaniyadeeduna dhaafi wayday $37 milyan waxna dalka aan u dhisin iyo xukuumadda jirtay laba sanadood iyo badh ee durba miisaaniyaddii gaadhsiisay $ 125 milyan in la yidhaa tii horaa dhaantay ! Taasi waxay ka dhigantahay marka maaliintiina lagu sheego habeen, habeenkiina la yidhaa waa maalin. Hadaba shacabkii Somaliland maanta waxay mabsuud ka yihiin xukuumaddan maanta talada haysa anagaana ka markhaati ah waxay tii hore na baday iyo maanta danyartii sida noloshoodu durbadiiba ay u soo dhismayso. Afmiinshaarkii xaaran cunka ku naaxay ee qadhiidhka maalin laha ahaa ku noolaan jiray ayuun baa maanta ka qatan xaaraantii oo ay ka badatay qaylo iyo qaaq iyo been abuur. ILLAAHOW dawladan mar labaad noo soo celi ayaanu leenahay.
Naceema Xasan Nuur
Previous PostCuqaal iyo Waxgaradka Degmada A/Dhagax oo Dadweynaha u soo jeediyay ilaalinta Nabad-gelyaddaNext PostDahabshiil: The maker of liquid gold	Blog